နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(International Phonetic Alphabet မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အက္ခရာ – partially featural
မည်သည့်ဘာသာစကားအတွက်မဆို သဒ္ဒဗေဒ နှင့် သံရင်းပြန် အသံဖလှယ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် သဒ္ဒဗေဒ သင်္ကေတများ ပါဝင်သည်။ သင့်တော်သော Help:Special characters မရှိပါက သင်သည် သဒ္ဒဗေဒ သင်္ကေတများအစား မေးခွန်းသင်္ကေတ၊ လေးထောင့်ကွက် (သို့) အခြားသင်္ကေတများကို တွေ့မြင်နေနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ (အင်္ဂလိပ်: International Phonetic Alphabet; IPA) သည် အက္ခရာအခြေပြု သဒ္ဒဗေဒသင်္ကေတစနစ်တစ်ခုဖြစ်၍ အဓိကအားဖြင့် လက်တင်စာလုံးများအပေါ် အခြေခံထားသည်။ နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအသင်းက ၁၉ ရာစုနှောင်းတွင် စကားသံများကို အရေးအသားပုံစံဖြင့် စံစနစ်တကျကိုယ်စားပြုရန် တည်ထွင်ခဲ့သည်။ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ (IPA) များကို အဘိဓာန်ပြုစုသူများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်ယူ/ကြားကြသော ကျောင်းသူ/သား၊ ဆရာ/မများ၊ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များ၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူများ၊ အဆိုတော်များ၊ ဆရာဝန်များ၊ ကိုယ်တိုင်ဘာသာစကားတည်ဆောက်သူများနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုသူများက အသုံးပြုကြသည်။
သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများကို အပြောဘာသာစကားရှိ ဝေါဟာရဆိုင်ရာ အသံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော စကားသံ၏ အရည်အသွေးများကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ စကားသံ၏ အရည်အသွေးများဆိုသည်မှာ စကားသံ (phone) ၊ သံရင်း (phoneme) ၊ တက်ကျသံ၊ စကားလုံးနှင့် ဝဏ္ဏခွဲခြားခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ သွား/အံကြိတ်ခြင်း၊ စကားမပီခြင်း ('တ'သံကို 'သ'သံထွက်သကဲ့သို့) ၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲရှိသူများ၏ စကား(သံ)၏ ထပ်တိုးအရည်အသွေးများကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် ထပ်တိုးသင်္ကေတများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများကို ပုံစံနှစ်ခု၏ အခြေခံအခြင်းအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရာ ၎င်းတို့မှာ အက္ခရာနှင့် ဖြည့်စွက်သင်္ကေတ (မြန်မာစကား၏ ဗျည်းတွဲများကဲ့သို့) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားရှိ ⟨t⟩ ၏ အသံကို အသံအရည်အသွေးတိကျမှုအပေါ် မူတည်၍ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ [t] ကိုသုံး၍ ဖလှယ်နိုင်သည့်အပြင် ဖြည့်စွက်သင်္ကေတ [t̺ʰ] ဖြင့်လည်းရေးသာနိုင်သည်။[note ၁] ဆလာ့ရှ် (Slashes; ဒေါင်လိုက်ညာစောင်းမျဉ်းတို; / / ) နှစ်ခုကို သံရင်းပြန်အသံဖလှယ်ခြင်းအား ညွှန်းဆိုရန်သုံးရာ /t/ သည် [t̺ʰ] (သို့) [t] ထက်စာလျှင် ပို၍ ယေဘုယျဆန်ကာ နောက်ဖော်ပြထားသည့် နှစ်လုံးအနက် တစ်ခုခုကို ဘာသာစကား၊ အဆက်စပ်ပေါ်မူတည်၍ ကြိုက်ရာကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအသင်းက အခါအားလျော်စွာ အက္ခရာ၊ ဖြည့်စွက်သင်္ကေတများကို ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖြုတ်ပယ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ၂၀၀၅ တွင် နောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲမှစ၍ ယခုအထိ သီးသန့်အသံအပိုင်း အက္ခရာ ၁၀၇ ခု (segmental letters) ၊ မြောက်များစွာသော အသံအရည်အသွေး (suprasegmental; ဖိ၊ဖော့၊ရှည်၊တို ...) ပြ အက္ခရာများ၊ ဖြည့်စွက်သင်္ကေတ ၄၄ လုံး၊ သံနေသံထားပြ ဝေါဟာရဆိုင်ရာ (extra-lexical prosodic) အပိုအမှတ် လေးခုတို့ဖြစ်ကြသည်။ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာအများစုကို လက်ရှိ နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ ဇယား၌ ပြသထားသည်။
↑ The inverted bridge under the ⟨t⟩ specifies it as apical (pronounced with the tip of the tongue), and the superscript h shows that it is aspirated (breathy). Both these qualities cause the English [t] to sound different from the French or Spanish [t], which isalaminal (pronounced with the blade of the tongue) and unaspirated [t̻]. ⟨t̺ʰ⟩ and ⟨t̻⟩ thus represent two different, though similar, sounds.
↑ ၁.၀ ၁.၁ International Phonetic Association (IPA), Handbook.
↑ ၂.၀ ၂.၁ MacMahon၊ Michael K. C. (1996)။ "Phonetic Notation"။ in P. T. Daniels; W. Bright (eds.)။ The World's Writing Systems။ New York: Oxford University Press။ pp. 821–846။ ISBN 0-19-507993-0။
↑ Wall၊ Joan (1989)။ International Phonetic Alphabet for Singers: A Manual for English and Foreign Language Diction။ Pst။ ISBN 1-877761-50-8။
↑ IPA: Alphabet။ Langsci.ucl.ac.uk။
↑ Full IPA Chart။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံတကာ_သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ&oldid=670681" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။